मित्र! यस दुर्भाग्यपूर्ण पत्नीहरू र जो मा बढ्न त्यागेर बच्चाहरु कति हाम्रो संसारमा छोडेर एक्लो आमा वा बुबा परिवार! मनोवैज्ञानिक र sociologists यो सोच्न के थाहा छैन: यो अन्तस्करणको एउटा twinge बिना जस्तो थियो, मानिसहरू धेरै बस आफ्नो छोड्न "परिवार गुँड।" तर यो सधैं त छ? किन कारणहरू छन् मानिसहरू जाने आफ्नो घर बाहिर मात्र आफूलाई मा झूठ? गरेको यो बुझ्न गरौं। तपाईंले यसलाई हुन सक्छ जो हरेक परिवार, बस अलग गिर छैन भनेर बुझ्न छन्। यसलाई तपाई कि हिजो सबै सही र अब कुनै कारण लागि मेरो श्रीमान् आफ्नो कुरा मा सबै भेला र घर छोडेर हुँदैन। सबै बस disingenuous, बस यति थियो कि दाबी गर्ने कुनै पनि महिला - को fortuneteller जाने छैन! कि मानिस सधैं अन्तिम समात्नुहोस् हुनेछ एक राय छ। र त्यसपछि मात्र, सबै परिवार धेरै खराब हुनेछ जब, र त्यहाँ अर्को महिला को अनुहार मा "निवर्तमान" हुनेछ, तिनले परिवारको छोड्छ। के गर्नुपर्छ? किन मानिसहरू सधैंभरि घर छोड्न?
यदि तारा रोशनी छन् ...
सम्झना, एक मानिस - एक मूर्ख। तपाईं यस्तो आमूल कारबाही अघि, एक हजार पटक सबै वजन र विचार छ। र उहाँले छोड्न निर्णय भने, यो अवस्था deadlocked छ भन्ने हो। एक महिला छ भन्ने तथ्यलाई पहिलो भावना ट्रिगर, र त्यसपछि मात्र - मन। हामी गरिब छन् भने, हामी राम्रो हो कि बहाना सक्दैन: पत्नी पतिको गर्न चिसो हुर्किसकेका छ भने (वा त्यो अन्य देखा), त्यसपछि पति बुझ्न सजिलो छ। उहाँले पनि यो अब कि मेरो जीवन खर्च गर्न जा गर्नुपर्छ, गर्व छ, उहाँले indifferent भयो। तर, अर्को पक्ष गर्न "सिक्का" मानिसहरू आफ्नो पत्नीहरू टाढा सार्दै किन रूपमा छ। के? अब तपाईं पत्ता! किन मानिसहरू परिवार छोड्न केही कारण
दुई मोर्चों मा
अधिकांश पुरुषहरु त्यसैले तिनीहरू केवल एक व्यक्ति बस्न सक्दैन प्रबन्ध छन्। मान्छे दोहोरो जीवन रुचि - तिनीहरूले एक पत्नी र एक Mistress दुवै छ। यो "तीन सम्बन्ध" एक पार्टी "एक दङ्गा" उठाउनु छैन रूपमा झैँ लामो अवस्थित जारी। तर मानिसहरू, पनि यो मामला मा, हिम्मत छैन सम्बन्ध तोड्न, तिनीहरूले अन्तिम सम्म प्रतीक्षा हुनेछ ... चलाख महिला आफ्नो पक्षमा मुद्दा सुलझाने, रणनीति, धैर्यता र स्नेह प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई को एक को फलस्वरूप, उहाँले दूर जान्छ, र को व्यवस्था "प्रेम त्रिकोण" सधैं पत्नी छ।
किन मानिसहरू आफ्नो पत्नीलाई छोड्न अन्य कारणहरू
परिवार मा ब्याज को हानि। पति निरन्तर छ भने reproaches र भ्रष्टाचार, प्रेम र स्नेह को सट्टा उहाँले केवल एक अपमान देख्नुहुन्छ भने, निश्चित, चाँडै यो आदेश गरिनेछ परिवार सडक हुन "काटन कार्य"।
प्रेमको अभाव। तपाईं र तपाईं हृदय देखि कुरा पछिल्लो समय आफ्नो पति जब सम्झना? र तपाईं उसलाई अङ्कमाल गर्दा, सम्झना? उहाँले मात्र एक र प्रेम गर्न चाहन्छ! अन्यथा, सबै यो अन्य घरमा लिन्छ ...
Bytovuha। पति र पत्नी बीचको सम्बन्ध एउटा बानी परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईं अब एक रोचक र यसलाई अघि थियो रहस्यमय यस्तो हो भन्ने महसुस हुनेछ। उहाँले नरमाइलो गर्नुपर्छ र बिरामी ... उहाँले एक पटक तपाईं संग थियो कि, एक नयाँ र युवा सहयात्री, फेरि पहिलो बैठक ती चाखलाग्दा क्षणमा दिन हुनेछ जुन हेर्न सुरु हुनेछ।
"Koshel" पैदल। मानिसहरू किन घर छोड्नु को सबै भन्दा साधारण व्याख्या, को ... वित्त मा खण्डमा। होइन, म पैसा को अभाव, र विपरित कुरा छैन छु। मानिस उनको हातमा "पर्स" महसुस गर्दा पत्नी संग रोचक हुन्छ। यस उहाँले अब पत्नी देखि यो "reciprocity" प्रतिक्रिया हुनेछ वास्तवमा भन्दा सबै - यो बाहिर हालियो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ, आफैलाई एक नयाँ र "nepotrepannuyu" खेलौना किन्न।
पीडादायी प्रश्न: कसरी प्रेम एक भूल
के मान्छे फाले भने? आफ्नो जीवन परिवर्तन
किन मानिस एकाएक कुरा रोकियो? पुरुष र महिला सञ्चार को मनोविज्ञान
एक प्रेम एक को मृत्यु कसरी बच्न
जवान छोराछोरीलाई रेखाचित्र लागि मार्गदर्शकरेखाथप्नुहोस् मदत गर्न सक्छ
Shevchenko पार्क, खार्किव: समीक्षा र फोटो
बच्चा को गर्मी कसरी कब्जा गर्न: pediatricians को सल्लाह
आमाको दिनको लागि विचार -, हास्यास्पद उत्तेजक, रचनात्मक
3D-सुरक्षित क्रेडिट कार्डमा के हो
Osteosclerosis - यो के हो? Subchondral osteosclerosis: कारण, लक्षण र उपचार सुविधा
ककडी। कसरी बीउ देखि खीरे को बिरुवा बढ्न?
बाल सदन मा शैक्षणिक प्रक्रियाको कसरी योजना